Yiza ufumane isiqithi saseMarajó! - I-Airbnb
Yiza ufumane isiqithi saseMarajó!
Jubim, Pará, Brazil
Igumbi lakho lokulala sinombuki zindwendwe onguAdelaide Maria
UAdelaide Maria yi-Superhost
"I-Sitio bicho do Mato", njengasekhaya, kwindawo yokuhlala yangasese phakathi kwendalo, indlu eqhelekileyo eyenziwe ngodongwe kunye neendiza, apho unokubona khona: iinkuni, iinkawu, i-toucans, i-parrots, ama-butterflies kunye nezinye izilwanyana.
indawo yokuhlala eqhelekileyo kunye yabucala kunye nembono entle ngqo elunxwemeni kwindawo enemithi abantu 2-3, 1 ibhedi kabini musk-inyembezi + kunokwenzeka ukongeza ibhedi 65cm camping simahla. Kwindawo yeendwendwe, i-hammock yesibini ngaphandle ukuze ilale emva kwemini, okanye ichithe umzuzu we-zen. Isidlo sakusasa sifakiwe!
Ilali izolile, unokuhamba elunxwemeni ukuze ubone ukufika kweenqanawa zokuloba kwaye uthenge iintlanzi ezilungileyo ezintsha, ukuba intliziyo yakho ikuxelela ukuba wenze njalo. Kufuphi nevenkile yokutyela, ukukhwela inyathi okanye ukuhamba kunxweme lwenyathi, phuma ngesikhephe okanye i-kayak kwingalo yeAmazon kwaye ufumane imango.
Umbuki zindwendwe ngu- Adelaide Maria
In Site wethu singahamba bagcine iinkawu, kwagcwala, iitoucan, izikhwenene, amabhabhathane kunye nezinye izilwanyana ezithile "Ukubona ezi zilwanyana alunakuqinisekiswa, kuxhomekeke ngobume engqondweni nabemi ehlathini ... kwaye imvo yakho." Ukwabelana ngesinye isidlo sentsapho kunokwenzeka nge-15 R$ umntu ngamnye. Ndizakube ndikhona ngexesha lokuhlala kwakho, ndizakubonisa abakhenkethi kwaye ukuba kunokwenzeka ndingabakhapha. Sithetha isiPhuthukezi, isiFrentshi nesiTaliyane.
In Site wethu singahamba bagcine iinkawu, kwagcwala, iitoucan, izikhwenene, amabhabhathane kunye nezinye izilwanyana ezithile "Ukubona ezi zilwanyana alunakuqinisekiswa, kuxhomekek…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Jubim